အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိကျောင်းတစ်ကျောင်းအတွက်သင့်ကလေးစတင်ရန်, သင်ကျောင်းမှာသင့်ကလေးကိုမှတ်တမ်းတင်ရမည်ဖြစ်သည်. ဤသူသည်သင်တို့ကိုစတင်သင့်ကလေး၏ကျောင်းကျောင်းနှင့်နိမိတ်လက္ခဏာစာတမ်းများသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုလိုတယ်.
စီမံခန့်ခွဲသူသည်ကျောင်း၌သင်တို့၏သားသမီးတို့စာရင်းသွင်းသင့်အမှု၌သင်တို့ကိုကူညီပေးပါမည်. သငျသညျစာတမ်းများလက်မှတ်ရေးထိုးနှင့်သင့်ကလေး၏ကျောင်းကအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ပေးရမည်. ဒါဟာကျောင်းကခရိုင်အကြားမတူ.
တပ်၌သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏တိုင်းပြည်မပြေးနေချိန်မှာအတော်များများကဒုက္ခသည်ကျောင်းသားများအတွက်ကျောင်းကလွဲချော်ခဲ့ကြပေမည်. ဒါဟာတူညီတဲ့အသက်အရွယ်အမေရိကန်ကျောင်းသားအဆင့်အဆင့်ဆင့်အတွက်ပျမ်းမျှအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါသည်. အချို့သောကျောင်းသားများအဆင့်မြင့်ရှိစေခြင်းငှါ, ဒါပေမဲ့သူတို့ပြီးနောက်အင်္ဂလိပ်စကားမပြောတတ်ကြဘူး. ဤရွေ့ကားကျောင်းသားများအတွက် ပို. ပင်ခက်ခဲသင်ခန်းစာများပိုကောင်းအင်္ဂလိပ်သင်ယူဖို့ပြဿနာများကိုရင်ဆိုင်ရစေခြင်းငှါ. တခါတရံကျောင်းများတွင်မှားအတန်းအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိကျောင်းသားများကိုထား.
ကျောင်းသားများကျောင်းတစ်နှစ်ရဲ့ start မတိုင်မီသို့မဟုတ်ကျောင်းတစ်နှစ်ရဲ့အစမှာအချို့စမ်းသပ်မှုလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်. ဒါဟာစမ်းသပ်မှုစာဖြင့်ရေးသားစေခြင်းငှါ. ဒါဟာကျောင်းသားမှမေးခွန်းများကိုဖတ်ရှုဖို့အကြီးတန်းစမ်းသပ်အသက်အရွယ်ဖြစ်နိုင်သည်. ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီကျောင်းခရိုင်များအတွက်ကွဲပြားခြားနားသည်.
သင်သည်သင်၏ကလေးသည်မှားအတန်းထဲတွင်နေရာထားပြီးစဉ်းစားလျှင်, သင်ဆရာဒါမှမဟုတ်မန်နေဂျာသို့မဟုတ်သင့်ကလေးကစမ်းသပ်ပြီးသောအဖွဲ့သည်စကားပြောကြောင့်ထည့်ထားနိုင်ပါတယ်. သငျသညျမှားအနေအထားယုံကြည်ရှင်းပြ. မေးပါ, “သငျသညျအဘယျသို့ထင်ခဲ့တာလဲ” ကျောင်းသင်သည်သူတို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်နားလည်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်. သူတို့သည်သင်၏အကြောင်းပြချက်မှသဘောတူလျှင်သင်အနေအထားကိုပြောင်းလဲပစ်နိုင်မည်အကြောင်း.
အလယ်အလတ်နှင့်အလယ်တန်းကျောင်းများအတူတူပင်တန်းအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်ဆင့်မှာဆုံးမသွန်သင်အတန်းပါဝင်သည်. အခက်ခဲဆုံးနှင့်အချို့သောပိုမိုလွယ်ကူ၏အချို့. တခါတရံမှာသင်တန်းများအတွက်အခက်အခဲအဆင့်အမည်များကိုဖော်ပြရန်. စကားကျောင်းခရိုင်နှင့်အညီကွဲပြား.
ထိပ်သို့မဟုတ်အဆင့်မြင့် level မှာစာသင်ခန်းများ၏အမည်များ:
အဆင့်မြင့် Mode ကို (အေပီသတင်းဌာန)
မိဘများ၏အကြံပြုချက်များ / ဂေါကလူကြီး
လိုအပ်သောအသက်အရွယ်ကြားရှိအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ကျောင်းသားများအတွက်ကျောင်းအပ်6နှင့် 16 ခုနှစ်. အချို့သောပြည်နယ်များမှာတော့ကွဲပြားခြားနားသောအသက်အရွယ်တစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်နှစ်ဖြစ်နိုင်သည်. ဒါ့အပြင်ပုံမှန်တက်ရောက်သူသင့်ရဲ့ကျောင်းသားများအတွက်အလွန်အရေးကြီးပါသည်. School တွင်တက်ရောက်ခြေရာကောက်. သင့်ရဲ့ကျောင်းသားများအတွက်ကျောင်းကရက်ပေါင်းအများကြီးဆုံးရှုံးလျှင်ပညတ်တရားကိုသင်တို့အားတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ရနိုင်. ကျောင်းသားရက်ပေါင်းအများကြီးဆုံးရှုံးဖို့စတင်ခဲ့လျှင်သင်သည်များစွာသောသတိပေးချက်များရလိမ့်မယ်. ကွဲပြားခြားနားသောပညာရေး၏ကွဲပြားခြားနားသောကဏ္ဍများများ၏အရေအတွက်အတိအကျကို.
ကျောင်းနှောင်းပိုင်းဖြစ်ခြင်း. နှောင့်နှေးလည်းနှောင့်နှေးဟုခေါ်သည်. နှောင့်နှေးခှငျ့နဲ့ကိုယ်အပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ပါ. နှောင့်နှေးဆင်ခြေဆင်လက်ပျက်ကွက်၏တူညီသောစာရင်းရှိပါတယ် Excuse.